Ibsa Koree Qindeessituu Mana Lubummaa Ortodoksii Oromiyaa (Onko 16,2019) – Kichuu
HomeAfaan OromooTVIbsa Koree Qindeessituu Mana Lubummaa Ortodoksii Oromiyaa (Onko 16,2019)
Oduu Guyyaa lama Haandhurra oromiyaa magalaa finfinee keessaa Dhagaaha jiru hedhuu Yaadessadha garuu Oduun #Addis__Standard Irratti Baate Akka Jettutti, Kantiibichi fi MM Guyyaa 2 Dura Walgahanii Turan. Gaafuma San MM Obbo Taakkalaaf Iddoon Kantiibummaa Finfinnee Aaddee Adaanach Abeebeetiin Akka Gaggeeffamuufi Inni Akka Jijjiirame Ibsaniif. Hanga Miseensummaan Mana Maree Tayuu Aaddee Adaanach Sirraahutti Ykn Seeraan Qajeelutti Akkuma Jirutti Itti Fufama. Sababni MM Taakkalaa Kaasaniif Maal Akka Taye Hin Ibsamne. Gama Biraatiin Falasama MM fi Paartii EPRDF Tokkotti Jijjiiruu Koreen GG ODP Marirra Ture. Sababa Miseensonni Bakka Lamatti Yaadaan Qoodamaniif Murtee Irra Hin Gahamne Jetti Oduun. Kantiibichi Hujii Irratti Kaleessaa As Hin Argamne Jedhamees Jira. Obboo Taakkala Uumaa Ministeera Bishaanii fi Annisaa Tayuu Hin Oolle Garuu Walkeessa Dhahiinsa Hooggansaa MM Tibbana Godhamuuf Deemu Irratti Beekama.
Adaanech Abeebee kan dhalate guddate godina Arsii Arbaa Guuguutti, Arba guugu Aanoota 5 fi magaaloota heddu akka qabdu ni beekama. Konyaan kuni bakka qabsoon Bilisummaa Oromoo itti injifannoo fi aaarsa guddaa itti argatee fi kafalleedha. Koonya tan kesssa Amaari baldhinaan qubsiiffame argama ture Adaanech maatin isii Tuulama -Arsii fi warra amantaa Ortodoksii hordofuu waan tureef Oromoota biraa irraa sababa amantaatin Amaaraati dhihaatu, wajiin jireenyi isaani Amaaraa waliin malee Oromoo walin hin ture. Kuni kanaan osoo jiru bara 1984ti yeroo ABOn arbaa Guuguu qubate sanitti tarkaanfi Amaaraa irraati fudhateen maatii Adaanechi Abeebee ilee gar malee miidhamanii, qabeenya heddus samaman.
Adaanech ABO fi Arsiin Muslimaa waan nuti amantaa Ortodoksii hordofnuuf rakkoon kuni nura gahe jette yaadi. Sababa kanaan Arsii, ABO fi muslimas diina goote qabte. Xiiqiidhuma kanaaf bara san keessa OPDOti makkamte. yeroo san akkuma beekamu miseensooni OPDO baay’een isaani nafxanyaa maqaa oromootin sochootu fi gantoota turan. Adaanech erga OPDO taate booda aarii ABOm maati irraan gahe saniif jechaa ilmaan Oromoo arbaa guuguu ABO jechuutn TPLF waliin hidhati gursiisuun, ajjeesisuu fi amantaan adda qoodun walirrati bobaasa turte.
Yeroo kantiibaa magaalaa Adaamaa taate hojjate sanittis kan gochaa turte kanuma. Adaanech ilaalcha amantaa tokko, afaan tokko, biyya tokko jedhu ofi keessa qabdi, Oromummaa caalaa itoophiyumman boonti, namni saboonummaa jedhu nama walaalaa waan beekine ta’ee itti muldhata. Jibbiinsa amantaa Muslimaa sammu keessa qabdi. Yeroo Adaamaa kantiibaa taate akkuma hojji eegaltee namoota 65 arsii fi Muslimaa ta’an batalumati hojji irraa ariite. Sheekoota dhiimma ta’ee tokkof wajjira isii dhaqan “yoo didan areeda kana isin irraa haadha” jette arbsaa turte. hedduu nama tufati.
Keessatu ABO, Arsii fi Muslimaa waan jedhamu arguu hin feettu. Mana barumsaa bulti Addaa kan WMO ijaarsise ijoolee qabxii guddaa qabdu ilmaan hiyyeesa keessa ariite ilmaan nafxanyoota Oromoo ofin jedhani itti galchaa turte. Inni birraa ammo Dr Alamuu Simee waliin ilmaan Naannoo tokkoo fi amantaa tokko waan turanii fi akkuma isii maatin Alamuu Simee ABOn rakkon guddan waan irraa gaheef lameen isaani akka malee wal jabeesu. Lameenu diini isaani guddan ABO dha. Sababni guddan tokko OPDOti makkamaniif ilee isa.
Ilmaan Oromoo ABO jechuun TPLF walin huursoti hiisisaa turan, ajeesisaa, ijoollee arbaa guuguu meqaa akka isaan dararaa turan qeerroon arbaa guuguu haa dubbatu. Dr Alamuu Simee erga saboonton Muraasin OPDO keessa turan taphan alla gochuun ari’amee booda adaanech Abeebeati namni gara Naannoo Oromiyaa deebise yeroo hooggana wajjiraa OPDO taate saniti. Adaanech saboonummaa irraa nama bilisa ta’edha. Itoophiyumma malee Oromummati nama qaanfatuudha. Namni siida H/Adam Saaddoo akka goobati hin ijaarame godhe Adaanechi maati isiiti.amma waan Takkalaa Uumaa isin bakka bu’eef namni ifa hin ta’innif jirra? Kanuma .
Discussion with Fasika Arega and Abebea Teferi about Kimants’ people torture, extra judiciary killing and Amhara Regional Government
#Mootummaan qabsoo karaa nagaa hugguraa jiraachu isaa warri hin bariin baraa.
Warrii midiyaatti gadi baatanii “Utuu qabsoon karaa nagaa danda’amuu, utuu walfalmuun danda’aamuu maliif qawwee kaafna” jechuun dantaa har’aaf jettanii saba keessan garbummatti kennaa jirtaniis argaa.
Miseensa gummii sabaa #ABO Boontuu Sanyii Oromoo ykn #Kadijjaa_Giroo_Robaa bakka dhaloota ishee godinaa Booranaatti yeroo imaltuu, guyyaa har’aa mootummaan tarkanfii ajjeechaa irraatti raawwachuuf yaalee hin milka’iin hafee.
#ABOn ummaata Oromoo dhageefatee galii malee jennaan galee, amma mootummaan qabsoo karaa nagaan akka hin soochonee akka isaan dhorkee jiruu uummataaf ifa gochuu qaba.
Yoos ummannii wareegamaa kalleessaf hanga yeroo ammaa kanatti baasa jiruuf gatii guddaa waan kennuuf fala barbaadachuu mala.
Caliisanii wajjira tokkichaa ho’ifatanii keessa ta’uun hooggantonnii Finfinnee jiraan qabsoo uummataa kan maatiif ilmaan sabaa hedduun gabbaramaa as ga’e itti qoosun hin ta’u.
Yoo mootummaan qabsoo karaa nagaa hin feenne hunda caalaa isuma waan rakkisuuf ABOn uummataaf waan jiruu ifa gochuu qaba. Hoggansi ABOs waan amma jiruuf waan as dhufaa jiruu uummata isaaf ibsee akka ummanni of-qopheessu gochuu qaba.
#HAMMA_OROMOO ARGEE KAN OROMOON #TAPHACHAA JIRU #Nafxanyicha_Hulluuqqee Masaraa Mootummaa Seenedha.
➤ Gaafa Lammaa Aangoo irraa buusee gola suuqu “tooftaaf Humna Waraanaa to’achuuf qophaa ta’eeti” jettan, garuu Lammaan Aangoo Waraana Ajajuu hin qabu yoo Uffata Seeraa bituu ta’e malee; Gaafa Xayibaa kaasu Waajjira isaatti Sabboontota funaanuuf jettan Aangoo irraa kaasee milkaa’uuf didnaan yaalii ajjeechaa irratti raawwate; Dheengadda Gaafa Masaraa Minilik Haaressee Ilmaan Nafxanyaa waamee Oromoo irratti miira tuffiin haasa’u gadi ba’ee Oromoon kana jedhe hin jiru hunduu manaa gunguma; Bulee gaafa inni osoo Waraana bobbaasee Haadha Ciniinsuuf deemtu D/Doollootti ajjeesisuu, Ilmaan Haadha tokkoo lama Eebantuutti boolla tokkotti awwalchiisuu, Misirroota cidha isaanii irratti Gujiitti ajjeesisaa Awwaalchisuu, Haadhaa fi Intala walbiratti Waraanni isaa gudeedanii, Manni Ummata Oromoo Gujii fi Wallaggaa akka Ciraa bonaatti ibiddaan gubsiisuu, ilma Oromoo Gullisootti Harka duubatti hisisee Rasasaan Gurra keessa rukkuchiisee ajjeesisuu Badhaasa Nobelii Nagaa warri Adii badhaafnaan Oromoon ba’ee #Gammachuu_lafa_dhiite.
➤ Har’a osoo guyyaa lama hin ooliin Inj.Taakkalaa Uumaa Aangoo irraa kaase du’een argama namni warra kaleessa yakka kana baga raawwate jedhee “#Abbichuu keenya nanni tuqe na tuqe” jechaa ture yoo har’a jedhe wal taajjabbii taati. Namichis kanaaf Oromoo tuffatee guyyaa guyyaan hojii diinummaa keessaayyuu kan Nafxanyuummaa farra Oromummaa dalagaa oola.
◀ Warri akka Nafxanyaa bobaa qabsoo Oromoo jala hulluuqee MM ta’e hin hubatiin har’a isiniif gala.
#Dhumarra_Herrega_Buusuuf sirbuun hiika hin qabu.
➤ “Jabbii Birraa badde Arfaasaa Emmo Emmo jedhu” jedha Oromoon.
◀ Nutti #hin_Waciinaa!—–#Iyyi Keessan nuu gamsiisee! Nobelii Badhaafamee Lafa dhunfattanii Samiif ol hiixattu Eng Taakkalaa Kantiibaa irraa buusee Hirriba dhiiftanii Suuraan Miidiyaa booressitu.
◀ Osoo Dhugaa Oromoo fi Oromummaaf dhaabbattanii Gaafa inni Ilmaan Oromoo akka #Harbuutti rasaasaan gadi harcaasu baatanii hin dubbanne Miseensa dhaaba isaa tokko Aangoo irraa buusuuf warri boossan dhaabaa nuti Boolla tokkotti ilmaan Oromoo lama Awwaalleeyyuu ni teenyee. Yoo Wacne malee jettan immoo akkuma gaafa Noobelii ta’aagaa innuu hamma keessan argee isiniin taphataa!
Kantiibaa Itti aanaan Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee Injinar Taakkalaa Uumaa aangoorraa kaafamuuf oduun jedhu hedduu haasa’amaa jira. BBC Afaan Oromoos dhimma kana qulqulleeffachuuf qaamota ammaaf eenyummaan isaanii akka ifa hin taane gaafatanitti bilbilee aangoo magaalichaarraa ”kaafamuun isaanii waan oolu hin fakkaatu” jedhaniiru.
Waraqaan ifattii kan himu ykn murtee kana ibsu ammallee waajjira Kantiiba akka hin geenye odeefanneerra. Injinar Taakkalaa Uumaa fedha aangoo kanarraa ka’uu akka hin qabaanneefi dhimmi kun mariif erga dhiyaateef booda gammachuu akka hin qabnellee namoonni odeeffannoo kanaaf dhiyeenya qaban himaniiru.
Sababni aangoorraa akka bu’an barbaadameefi murteen kun eenyuun akka murtaa’e hanga ammaatti beekuu hin dandeenye.Dhimma kanarratti yaada garaagaraatu dhagaahamaa jira. Murtichi osoo dhugaa ta’e, kaafamuun isaa siyaasa Oromoo keessatti hiikaa attamii qabaata laata?
Yaadni keessan maali?
Kun hojii gaarii dha; maqaa ganamaaatti deebi’uun mallattoo Bilisummaa ti!
Manni Maree Bulchiinsa Magaalaa Amboo maqaan gandoolee magaalicha keessatti argaman onkoloolessa 5 irraa eegalee maqaa ganamaan akka waamaman murteesseera. Bu’uuruma kanaan:
1.Ganda 01 jedhamee waamamaa kan ture Ganda Hora Ayeetuu
2.Ganda 02 jedhamee waamamaa kan ture Ganda Yaa’ii Gadaa
3.Ganda 03 jedhamee waamamaa kan ture Ganda Torban Kuttayee
4.Ganda 04 jedhamee waamamaa kan ture Ganda Sanqallee Faaris
5.Ganda 05 jedhamee waamamaa kan ture Ganda Kisoosee Oddoo Liiban
6.Ganda 06 jedhamee waamamaa kan ture Ganda Awwaaroo Qooraa jedhamee akka waamamu murtaa’eera.